M/weyne Trump oo ku hanjabay inuu ku dhowaaqi doono xaalad qaran oo deg deg ah… – Hagaag.com
M/weyne Trump oo ku hanjabay inuu ku dhowaaqi doono xaalad qaran oo deg deg ah…
Posted on 5 Janaayo 2019 by Admin in World // 0 Comments
Maxaa dhacay ka dib markii uu madaxweynaha Jimcadii la kulmay siyaasiyiinta Dimuqraaddiga?
Madaxweynaha ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa markii hore rajo wanaagsan ka qabay kulanka 90-ka daqiiqadood qaatay oo ka dhacay aqalka Cad , wuxuuna sheegay inuu yahay mid ay “natiijo wanaagsan ka soo baxeyso”.
Hase ahaatee xaaladdu ma noqon sidaas, saraakiisha Dimuqraaddiguna way diideen dalabka madaxweynaha.
“Waxaan ku dhawaaqi karnaa xaalad qaran oo deg deg ah waxaana u dhisi karnaa si dhakhso ah. Waa laga yaabaa inaan sidaas sameeyo. Waa jid kale oo noo furan”, ayuu yiri Mr Trump.
Madaxweynaha ayaa intaas ku sii daray; “Aad baan ugu faraxsanahay inaan sameeyo waxa aan sameynayo, uma aqaanno xannibaadda howlaha dowladda, waxaan u aqaannaa inaad sameyso waxa aad ku khasban tahay oo ay dan ugu jirto amniga dalkeenna”.
Afhayeenka aqalka Koongareeska, haweeneyda lagu magacaabo Nancy Pelosi ayaa sheegtay in kulankii dhacay Jimcadii uu ahaa mid la ogaa inuu “muran ka dhalan karay”, halka hogaamiyaha xildhibaannada Senate-ka ee xisbiga Dimuqraaddiga Mr Chuck Schumer uu isagana yiri “Waan u sheegnay madaxweynaha inaan u baahan nahay sidii ay dowladda ku sii shaqeyn lahayd, laakiin wuu ka soo hor jeestay”.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa shaki la galinayaa in Madaxweyne Trump uu ku dhawaaqi karo xaalad qaran oo deg deg iyo in kale.